Vavaka ho an'ny maty. ? Tsingerintaona nahaterahana, efa nodimandry sy tsara tarehy
Vondrona vondrona WhatsApp
Fantaro an-tserasera ▷ ➡️
mpanao gazety ESC manakatona
Ny vavaka ho an'ny maty
7 Famakiana Min
Vavaka ho an'ny maty. Ao anatin'izany isika dia afaka mangataka an'ireo fanahy izay eo amin'ny lalan'ny fitsaharana mandrakizay, mba hahitany ny fiadanana ilainy amin'ny fotoana fohy indrindra.
Azo antoka fa maro amintsika no nijaly FAHAFATESANA an'ny olona akaiky dia akaiky, tsy maninona na mpianakavy na namana izy, ny zava-dehibe dia tsy eto amin'ity tontolo ity intsony izy, efa lasa any ankoatra.
Voalaza fa raha tsy mivavaka ho an'ny maty ianao dia hanadino koa isika rehefa tsy maintsy mandeha amin'izany lalana izany.
Misy olona maziva handrehitra labozia ary manao alitara manokana mba hahatsiarovany ny olon-tiany rehefa manao vavaka.
Na izany aza, io finoana io dia matetika no voatsikera izay tsy mahazo indray ary zara raha kely finoana. Tsy re ireo olona ireo, dia ny fomba hitandremantsika ny fontsika hatrany.
1 Inona ny vavaka amin'ny maty?
1.1 Vavaka ho an'ny havany efa nodimandry
1.2 Vavaka ho an'ny maty
1.3 Ny vavaka ho an'ny maty amin'ny tsingerintaona fitsingerenany
1.4 Vavaka ho an'ny havany maty (katolika)
2 Hankafy tsara ve ny maty?
Inona ny vavaka amin'ny maty?
Misy ny mino fa, matetika, ny olona maty dia tsy vonona hiatrika an'ity tontolo ity, ka izany no antony ilantsika ny miangona vavaka ho an'ny olona mba hahita fitsaharana mandrakizay.
Inoana fa eo amin'io lalana io no ahafahan'ny maty manadio ny fanahiny amin'ny alàlan'ny eritreritra masina toy ny vavaka.
Matetika dia mahazatra ny manao vavaka sasany rehefa alevina ny maty, na izany aza tsy ampy hanohizana ireo vavaka Nandritra ny fotoana ela ary na izany aza dia manampy amin'ny alahelo sy fanaintainana amin'ny fisarahana ara-batan'ny fianakavianay na ny namantsika.
Mahatonga antsika hahatsapa fa mifandray isika na dia lavitra aza.
Vavaka ho an'ny havany efa nodimandry
Andriamanitra ô, Ianao irery no tompon'ny aina.
Nomenao anay ny fanomezam-pahasoavana ho teraka miaraka amina tanjona ary amin'ny fomba nahatanterahanay, niantso anao ho amin'ny fanjakan'ny fiadananao ianao, rehefa mieritreritra ianao fa efa vita ny asa nanirahana an'ity tontolo ity.
Na taloha na aorian ...
Androany aho dia te hiseho eo anoloanao am-panetren-tena lehibe ary azo antoka fa henoina ny fangatahako.
Androany aho te hitalaho ho an'ny fanahin'i (anaran'ilay maty) izay nantsoinao hialana amin'ny sisinao.
Nataoko izao vavaka izao, ho anao tompoko, satria na amin'ny rivo-doza faran'izay ratsy aza dia fiadananao tsy manam-petra ianao. Ry Ray Mandrakizay, omeo fitsaharana any am-paradisan'ny fanahinao sy ny fanjakanao amin'ireo izay efa nandao ity fiaramanidina teto an-tany ity.
Ianao dia Andriamanitra fitiavana sy famelan-keloka, mamelà ny tsy fahombiazana sy ny fahotan'ity fanahy ity izay eo anilanao ankehitriny ary omeo fiainana mandrakizay.
Ary Izaho koa miangavy anao raiko, ho an'ireo rehetra tsy maintsy nisaona ny fandaozan'ny olona iray izay tsy mitombona intsony, sokafy ny fonao ary fehezo amin'ny fitiavanao izy ireo. Omeo fahendrena izy ireo mba hahafantaran'izy ireo izay mitranga.
Manome azy fiadanan-tsaina mba ho tony izy ireo mandritra ny fotoan-tsarotra. Omeo azy ny fahasamihafana mba handresena ny alahelo.
Misaotra anao tompoko, noho ny fihainoana ahy androany miaraka amin'ity vavaka ity izay ampaherezako am-pitiavana anao, ka amin'ny famindram-po sy fiadanana no omenao fiadanana amin'ny olona tsy manana an'io fotoana io.
Tariho ny dian'ny olona izay mitokana ankehitriny ary ampifalia azy ireo amin'ny fifaliana amin'ny fiainana.
Misaotra anao Dada, amena.
Tianao ny vavaka ho an'ny maty?
Aorian'ny fahafatesana dia misy ny olona azo antoka, fa afaka fotoana hiainana ny fahadiovan'ny fotoana hafa, fa tsy ny zava-drehetra no very fa manana fahafahana hafa isika.
Ao amin'ny tenin'Andrimanitra no ahitantsika tondroina mba hahazoana famelan-keloka eto amin'ity tontolo ity na amin'ny ho avy; I Jesoa Kristy tenany mihitsy no nilaza izany tao anatin'ny iray amin'ireo fivoriana mahagaga.
Tena zava-misy izay tsy ahafahantsika miala, ankoatry ny mamafy ary rahampitso dia hanao toy izany koa ny olon-kafa.
Vavaka ho an'ny maty
Ry Jesosy, ny hany fampiononana amin'ny ora fanaintainana mandrakizay, ny fampiononana tokana fotsiny amin'ny tsy fahantrana lehibe izay ateraky ny fahafatesana eo amin'ny olon-tiana!
Ianao, ry Tompo, izay hitan'ny lanitra sy ny tany sy ny olona alahelo amin'ny andro mampalahelo;
Ianao, ry Tompo, izay nitalaho tamim-pitiavana ilay fangorahana sakaiza indrindra;
Ianao, ry Jesoa! fa namindra fo ny alahelonao ny trano torotoro sy ny fo feno fitarainana tao anatiny tsy misy tony;
Ianao Ray be fitiavana ô, aza manenina ny ranomasony.
Jereo izy ireo, Tompo ô, ahoana ny rà mankarary fo, noho ny fahaverezan'ny olona tiana malalany indrindra sy mahatoky ary Kristiana mahatoky.
Jereo ry zareo, Tompo ô, ho fandoavanay atolotray anao ho an'ny fanahinao, mba hahafahanao manadio azy amin'ny ra sarobidyo sy handraisanao azy haingana araka izay azo atao rehefa mankany an-danitra, raha mbola tsy tantinao akory io!
Jereo ry zareo, Tompo ô, hanome anay hery, faharetana, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ity fitsapana goavana ity izay mampijaly ny fanahy!
Jereo izy ireo ry maditra, ry Jesoa mpivavaka be! ary ho azy ireo dia manome anay fa ireo izay eto an-tany dia niaina nifatotra tamin'ny fatoram-pitiavana mahery vaika, ary ankehitriny malahelo isika amin'ny fotoana tsy hisian'ny olon-tiana, mivory indray miaraka aminao any an-danitra izahay, hiaina mandrakizay ao am-ponao.
Tsy misy fisalasalana, tsara tarehy vavaka ho an'ireo havany efa nodimandry.
Ny vavaka tsara indrindra ho an'ny maty dia ireo izay vita amin'ny fo sy izay ahafahantsika mamela ny ao am-po foana.
Manontany izahay ho an'ny fitsaharany mandrakizayny Enga anie aho hahita fiadanana izay ilainao
Ny iray kosa dia mangataka antsika mba hameno antsika hery sy haintsika handresy ny fotoan-tsarotra mety lalovantsika.
Misy vavaka vitsivitsy izay mety ho mpitari-dalana, indrindra amin'ireo fotoana tsy ivoahan'ny teny noho ny fanaintainana sy ny alahelo.
Ny vavaka ho an'ny maty amin'ny tsingerintaona fitsingerenany
Ry Jesoa tsara fanahy, izay namindra fo tamin'ny fanaintainan'ny hafa dia Jesosy, mamindrà fo am-pitiavana ireo fanahin'ireo olon-tiantsika izay ao Purgatory.
Ry Jesosy ô, izay efa tia ny anao tamim-pahamendrehana mialoha, henoy ny fitalahoana ataonay aminao, ary noho ny famindram-ponao dia omeo ireo izay noraisinao avy tao aminay mba hankafy ny fitsaharana mandrakizay ao an-tratranao. infinito amor.
Avereno izy ireo, Tompo, fitsaharana mandrakizay, ary ny fahazavana maharitra mandrakizay no hanazava azy ireo.
Enga anie ny fanahin'ny mpino tsy hiala amin'ny famindrampon'Andriamanitra mba hialana amin'ny fiadanana.
Raha te hivavaka amin'ny mpianakavy ianao dia ity no vavaka marina ho an'ny maty.
Ny fahatsiarovana ny olona iray ao amin'ny fianakaviana na namana iray maty tamin'ny daty lehibe dia tsy azo ihodivirana.
Izany dia satria fotoana niainan'izy ireo nandritra ny fotoana nankalazana ary tsy izany fahatsapana ny tsy fahampiana izany olona izany, na izany aza dia misy ny vavaka na vavaka manokana tokony hatao amin'ireo daty ireo.
Afaka fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fampakaram-bady na sasany daty manan-danja iray hafa.
Ny zavatra manokana momba izany rehetra izany dia tsy ny manadino azy ary mangataka izay misy anao na aiza na aiza Mety hanana fiadanana sy mangina ary izany manohy manamafy orina ireo sisa tavela amin'ny fiaramanidina eto an-tany.
Indraindray dia mihaona amin'ny mpianakavy hafa ary manao vavaka ao amin'ny tokatrano, tadidio fa ny tenin'Andrimanitra no milaza fa raha toa ka roa na telo no mahatsiaro mangataka zavatra ho an'i Jesosy dia omen'ny Ray any an-danitra ny fangatahana natao.
Vavaka ho an'ny havany maty (katolika)
Andriamanitra ô, ianao izay manome famelan-keloka sy maniry ny famonjena ny olona, ​​mangataka ny famindram-ponao izahay ho fankasitrahana an'ireo rahalahinay sy havana rehetra nandao an'ity tontolo ity.
Omeo azy ireo amin'ny fanjakanao mandrakizay.
Ity dia vavaka ho an'ny maty, fa tena tsara tarehy!
Ny mivavaka ho an'ny maty dia iray amin'ireo lovantsofina tranainy indrindra ananan'ny fiangonana kristianina el tontoloNanjary foto-pinoana ny mino fa ny maty dia eo amin'ny toerana izay diovina mba hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra.
Toerana fitsaharana noforonin'Andriamanitra manokana ho azy ireo izany, mampiseho izany ny fitiavana tsy manam-petra omen'ny Tompo ho an'ny zanak'olombelona.
Miaraha fianakaviana Ny mivavaka ho an'ny havany maty na mangataka fety izay ahafahantsika manao vavaka sy vavaka manokana miaraka amin'ny namana sy olona hafa ao amin'ny fianakaviana dia fombafomba.
Manome toky ihany koa izany, ho famantarana fa tsy nanadino ny ankohonantsika isika ary hihaona indray.
Hankafy tsara ve ny maty?
Mazava ho azy.
Ny tanjon'ny vavaka amin'ny maty dia ny. Mangataha fanampiana, fanampiana, fiarovana ary fahasambarana ho an'ity olona tsy eto amintsika ity.
Hihatsara ihany izany. Raha mivavaka amim-pinoana sy amim-pitiavana ianao dia hitondra zavatra tsara maro, ho an'ny maty sy ho anao.
Vavaka bebe kokoa:
Vavaka ho an'ny ankizy
Vavaka ho an'ny Virijin'i Guadalupe
Vavaky ny zanak'ondry malefaka
Jolay 13, 2020
Vavaka ho an'ny reny efa maty
Jona 24, 2020
Vavaka mba hieritreretana ahy
Jona 23, 2020
Ny vavaka natao tony sy hanomezana toky ny olona iray
Ny vavaka mba hanesorana ny maso ratsy
Tantara teo aloha
Vavaka ho an'i San Alejo
Jolay 12, 2020
Vavaka ho an'i Saint Helena
Jolay 11, 2020
Vavaka mba hampisarahana ny olona roa
Jolay 10, 2020
Vavaka ho an'i Saint-cypianian
Jolay 9, 2020
Vavaka ho an'i San Marcos de León
Jolay 8, 2020
Vavaka ho an'i Santa Barbara
Jolay 7, 2020
Vavaka ho an'ny fahafatesana masina hahazoana vola
Jolay 6, 2020
Vavaka ho an'ny Zanaky Atocha
Jolay 5, 2020
Jolay 4, 2020
Jolay 2, 2020
Vavaky ny Fahafatesana Masina hanjaka amin'ny lehilahy iray
Jolay 1, 2020
Vavaka atao hahitana zavatra very
Jona 30, 2020
Vavaka mba hanonofinofy amiko
Jona 29, 2020
Vavaka ho an'i Satana
Jona 28, 2020
Vavaka ho an'i San Ramón Nonato
Jona 27, 2020
Vavaka hahazoana vola
Jona 26, 2020
Vavaka ho an'i Saint Charbel
Jona 25, 2020
Andininy 14 Baiboly ho an'ny tanora katolika
Vavaka ho an'i Santa Muerte mba hiverina ny hava-malala
Jona 22, 2020
Vavaky ny ran'i Kristy
Jona 21, 2020
Vavaka niantso ahy
Jona 20, 2020
Vavak'i Saint Ignatius any Loyola
Jona 19, 2020
Ny vavaka amin'ny fandefasana tsy misy olana
Jona 18, 2020
Vavaka amin'ny Fahafatesana Masina noho ny fitiavana tsy azo tanterahina
Jona 17, 2020
Ny vavaka hatao fanatitra
Jona 16, 2020
Ny vavaka ho an'ny fandidiana
Jona 15, 2020
Ny vavaka amin'i San Antonio hahitana fitiavana
Jona 14, 2020
Vavaky ny Mpitsara marina
Jona 13, 2020
Vavaka mba hahasarika lehilahy iray
Jona 12, 2020
Ny vavaka ho an'i San Marcos de León izay ho avy
Jona 10, 2020
Vavaka hatao batisa
Jona 9, 2020
Vavaka ho an'i Santa Muerte amin'ny fiasana
Jona 8, 2020
Vavaka ho an'i Saint Martin an'i Porres
Jona 7, 2020
Vavaky ny mahery
Jona 6, 2020
Vavaka aminny Trinite Masina
Jona 5, 2020
Ny vavaka ho an'ny asa
Jona 4, 2020
Vavaka amin'ny Fahafatesana masina hieritreretana ahy
Jona 3, 2020
Vavaka ho an'ny tso-drano
Ny vavaka aminny fanahy fotsiny mba hahatonga ny olona iray ho tonga
Jona 1, 2020
Vavaka ho an'ny virjin'i Montserrat ho an'ireo vehivavy bevohoka
Enga anie 31, 2020
Vavaka ho an'i Saint Catherine any Siena
Enga anie 30, 2020
Ny vavaka ho an'ny fandraharahana
Enga anie 29, 2020
Vavaka ho an'i San Roque
Enga anie 28, 2020
Enga anie 27, 2020
Ny vavaka mba handeha tsara ny zava-drehetra
Enga anie 26, 2020
Vavaka ho an'ny Masindahy Lazarosy
Enga anie 25, 2020
Vavaka ho an'ny Virjin'i Carmen
Enga anie 24, 2020
3 vavaka mahery mba hampody ny asa
Enga anie 23, 2020
Vavaka amelezana ny vady
Enga anie 22, 2020
Vavaka ho an'i Md Jude Thaddeus amin'ny raharaha sarotra sy kivy
Enga anie 21, 2020
Enga anie 20, 2020
Vavaka hanasitranana ny tebiteby
Enga anie 19, 2020
Enga anie 18, 2020
Enga anie 17, 2020
Vavaka hitahy ny sakafo
Enga anie 16, 2020
Ny vavaka ho an'ny alika marary | Mivavaha amin'ny finoana ary ampio ny fanasitranana ny namanao
Enga anie 15, 2020
Manasitrana vavaka mba ho sitrana haingana ny fahasalamanao
Enga anie 14, 2020
Nivavaka mba hiverenan'ny vadiko taloha
Enga anie 13, 2020
Ahoana no ahafantarana raha fitiavana na fisakaizana
Novambra 24, 2021
Ahoana no hanadinoana izay tianao
Ahoana no hahatonga ny vehivavy ho tia anao
Ahoana ny fomba hifaneraserana bebe kokoa sy hitovy amin'ny olona
Novambra 23, 2021
ENTANA NOVOKARINA To learn MAIMA VE Very lanja | FAHASALAMANA zava-pisotro Malagasy FAHASALAMANA Ahoana no Dios isan-karazany farany andian-teny Interpretación de los sueños angano Matematika vavaka Popular Santos No Category nofy hantsaka Tarot WhatsApp
Vaovao farany androany
Torohevitra Tambajotra sosialy